A mma obodo | eactivo | Spanish maka kwabatara
Malitegharịa ekwentị ahụ na ogologo okpukpu si Spanish akụ na a na-enwe olileanya uri ifo dere site anyị na-amụrụ Etsuko Nakajima obodo na ala ya, Japan. Ebe a bụ iwebata ya akụkọ Etsuko sequida. Ọ bụ mma, Right?
Etsuko: “Gara aga 70 afọ na biri agha ma-ekwe omume nke agha ọzọ na anaghị akwụsị exixtir, otú ahụ ka m na-atụ anya na e nweghị ọzọ agha. Ọ na-mụbara ọnụ ọgụgụ nke otu nne na nna ezinụlọ na ọnụ ọgụgụ nke ezinụlọ na ọdịmma na otú ahụ ka m na-eche ka anyị nwere a mba ebe niile ụmụ nwere ike ndụ na-enweghị nchegbu”.
M na-achọ na ụwa jupụtara nke ịhụnanya
M chọrọ ibi na-enweghị egwu
M na-atụ e nweghị ọzọ agha
M na-eche ka anyị nwere nnọọ mma n'ala
Olileanya anyị na-ebi a mma n'ọdịnihu!
M na-achọ ụmụaka na-etolite ike na ike!
-Adị m ka na ụmụaka nile nwere nne na nna
M olileanya na ụmụaka bi n'ala a na-enweghị mmetọ
Achọrọ m ụmụ iji nweta agụmakwụkwọ
M chọrọ ibi na a mma n'ọdịnihu!
Ọrụ a Etsuko Nakajima na Español Activo a ikikere n'okpuru a Creative Commons nwetakwa-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Bipụtara: Ọbuọtde B1, Graded ngosiputa
Tags: B1 , abụ , subjunctive , Nwata akwụkwọ Ọrụ
2 Comments “A mba mma”
November 12, 2015 na- 12:26
M na-eche a mara ezigbo mma mmetụta na nnọọ eluigwe na ala nke ọma.
November 12, 2015 na- 21:43
Dị nnọọ mma na-enwe olileanya! Ihe bụ nsogbu bụ na e nwere ọtụtụ ndị n'ụwa n'ihi na onye na-ike na akụnụba nwere ihe bara uru karịa nnwere onwe, ahụ ike na obi ụtọ. ma, Podem ekpe ekpere na ụwa mgbanwe na-eme n'ọdịnihu na-enwe ihe ndị kasị mkpa akụ na-kwuru na akụkọ. Daalụ maka ekere òkè na anyị habérselo.